दुःखद खबर :“घाँस का;ट्न गएका एक युव तीको रुख ले थि,चे,र मृ,त्यु ! -
Home समाचार दुःखद खबर :“घाँस का;ट्न गएका एक युव तीको रुख ले थि,चे,र मृ,त्यु...
दुःखद खबर :“घाँस का;ट्न गएका एक युव तीको रुख ले थि,चे,र मृ,त्यु !
अछाम जिल्ला #कमल बजार नगरपालिका वडा नं4मा जङ्गल मा घाँस #दाउरा लिन जाँदा 21 वर्षीय एक #युवतीको रुख ले थि, x चे, र मृ, x त्यु भएको छ मृतक प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली #( RIP ) शोक सन्तप्त #परिवार प्रति धैर्य धारणा गर्ने शक्ति मिलोसविविध #अपडेट तथा #जानकारी पाउन #पेज लाइक गर्नुहोला धन्यवाद
यो पनि – मेरो श्रीमान् त कहिल्यै पनि मेरो रहेनछन्…एक मनले त हैन होला भनेर मनमा प्रश्न आउँथ्यो। छोराछोरीलाई खाना दिएर फुपूसँग राखेँ, आफू अस्पताल तिर लागेँ। श्रीमानको सासबिनाको लास देखेर मन थाम्न सकिनँ। सबैतिर रुवाबासी चल्यो। व्यक्तिपिच्छे अड्कल काट्न थालियो। ‘श्रीमतीले गर्दा त होला नि अनि फलानो ढिस्कानो…।’